အဆိုပါပဋိညာဉ်တရားသစ် — ခရီးစဉ်လီ
ငါအသက်ရှင်သည်အဂီတပြုပါ. တဖန်သင်တို့၏အဖြစ်အများအပြားလည်းသိ, ငါပွုဂီတအမျိုးအစားကိုသင်တစ်ဦး CHBC ဝန်ဆောင်မှုမှာနားထောငျတျောစေခြင်းငှါ, သီချင်းတွေထက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်. ဂီတ၏အခြားအမျိုးအစားများထက်ကမတူညီတဲ့လုပ်ကြောင်းဟစ်ဟော့အကြောင်းအရာများစွာကိုရှိပါတယ်. ဟစ်ဟော့မှထူးခြားသောမရဲ့အရာတစ်ခုမှာ, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးဘုံသည် remix ဖြစ်ပါသည်.
အဘယျသို့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး remix နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သင်ပြီးသားကိုဖန်ဆင်းပါတယ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ယူသည်နှင့်သင်က remix. သငျသညျမူရငျးကနေတချို့ element တွေကိုစောင့်ရှောက်, သင်မူကားလည်းပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုလှည့်ဖျားထားရန်အချို့သောအမှုအရာကိုပြောင်းလဲ. ဒါကြောင့်သင်ဟာသစ်ကိုသီချင်းစာသားထည့်ပါစေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်တစ်ပြင်လုံးကိုအသစ်စည်းချက်, တူညီတဲ့အရာမှသို့မဟုတ်တစ်ရုံတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှု. သို့သော်ဂိုးတနားထောင်တတ်သူအသစ်တစ်ခုခုကိုပေးနှင့်ပင်သီချင်းကိုအပေါ်တိုးတက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ကောင်းပြီပဋိညာဉ်တရားသစ်, ယနေ့ညအကြောင်းကိုသောငါတို့စာသားကိုဆွေးနွေးပွဲ, နီးပါး remix ကဲ့သို့ဖြစ်၏. ငါသည်ဘုရားသခင်ကသူ့လူမျိုးနှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်လုပ်ကတိပြုကွောငျ့ပွောဆို, ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းအသစ်မဟုတ်ပါဘူး. သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြောင်းလဲမမူ, သူ့ရဲ့ကတိတော်မပြောင်းခဲ့ပါ, သူ့ရဲ့ခြုံငုံရည်ရွယ်ချက်မပြောင်းခဲ့ပါ. သို့သော်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဤပဋိညာဉ်တရားကိုအကြောင်းကိုအချို့သောအမှုအရာရှိပါတယ်. ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရား၏, အဟောင်းကိုပဋိညာဉ်တရားကိုအလုပ်မလုပ်ဘူး. ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခငျသညျသစ်တစ်ခုတဦးနှင့်အတူကအပေါ်တိုးတက်လာ. ဒါဟာသူ့ရဲ့အစီအစဉ် B ကမဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့သူကသူ့သားတော်အကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးပဋိညာဉ်တရားသစ်လုပ်ရှိသမျှတလျှောက်စီစဉ်ထား. ထိုအခါယေရမိ၌ဤပဋိညာဉ်တရားသစ်အကြောင်းကိုဖတ် 31.
ထှကျမွောကျရာမှာတော့, ဘုရားသခင်၏လူအဲဂုတ္တုလူအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခါလဒဲပြည်သားခဲ့ကြပြီးနောက်, သူတို့ကယျလှတ​​ျအတှကျကိုယ်တော်ကိုအော်ဟစ်. ထိုတဆယ်ဘေးဒဏ်နှင့်အတူသိသိသာသာဖက်ရှင်မှာသူတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဖာရောဘုရင်နှင့်၏နှလုံးကိုလှည့်, ဧဒုံပင်လယ်ကွဲ. ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုလူများကိုအပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်, သူကသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးသောပဋိညာဉ်တရားကို. သူကပြောပါတယ်, "အခုဆိုရင်ထို့ကြောင့်, သငျသညျအမှန်ပင်ငါ့စကားသံကိုနာခံခြင်းနှင့်ငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်မည်ဆိုပါက, သင်တို့ရှိသမျှသည်လူမျိုးတို့တွင်ငါ့အဘဏ္ဍာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်…" (ထှကျမွောကျရာ 19:5). သူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုသောအမှုဖွင်အရာကိုသူတို့ကိုသတိပေး. သူကသူတို့ကိုပေးသည် 10 သူတို့နောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းပညတ်တို့ကို. ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုယ်တော်နားထောင်လျှင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ကတိပေးထား, သူတို့ကသူ့ကိုစကားနားမထောင်လျှင်သူတို့ကိုကျိန်ဆဲစေခြင်း. လူများတို့သည်ဤပဋိညာဉ်မှသဘောတူနှငျ့ဘုရားသခငျကိုနာခံဖို့ကျိန်ဆိုပါစေ.
အလွန်ကြီးစွာသောညာဘက်အသံ? ရုံသူဟာမိန့်မအရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်. ဘုရားသခငျ့ရတနာအပိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, သူကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကအစဉ်အဆက်ပြီးနောက်ပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါပြဿနာကိုသူတို့ထံတော်ကိုနားမထောင်ခဲ့ကြသည်. သူတို့ကသဘောတူညီချက်၏သူတို့ရဲ့အခြမ်းကိုတက်များကိုမစောင့်ဘဲ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရမိ၏ကာလ၌ကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့ရှိ.
ယေရမိ၏စာအုပ်အဓိကအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုအကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်. စာအုပ်အများစုဟာဘုရားသခင်သည်သူတို့၏မနာခံမှုအဘို့ကိုယ်တော်၏ပရောဖက်ယေရမိအားဖြင့်လူကိုအရှက်ခွဲသသည်, နှင့်၎င်းတို့၏ဖျက်ဆီးခြင်းအကြောင်းပရောဖက်ပြု. သို့သော်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ် (30-33), ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသားကိုယနေ့တွေ့ရှိရသည်အဘယ်မှာရှိ, ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုရန်သူ၏ကတိကသူတို့စိတျခစြေရာ, သူတို့၏ပုန်ကန်မှုကြားမှ, သူသူတို့အပျေါမှာသွန်းလောင်းမည်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပရောဖကျပွု. ဒီဖျက်ဆီးခြင်းအားလုံးပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်, သူကသူတို့ကိုပြန်ပေးသွား. သူသူတို့နှင့်အတူလုပ်မယ့်ဒီပဋိညာဉ်တရားသစ်၏သူတို့ကိုပွောတယျ. ထိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရန်သွားနေတာဘာ. များစွာရှိပါသည်, ကျနော်တို့ပဋိညာဉ်တရားသစ်အကြောင်းကိုပြောနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအရာများစွာကို, ငါတို့မူကားယနေ့နံနက်တစ်ကျမ်းပိုဒ်အာရုံစူးစိုက်မယ်.
"ဒါဟာငါအချိန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုး၏အိမ်တော်ကိုအတူငါဖြစ်စေမည်ပဋိညာဉ်တရားကိုဖြစ်ပါတယ်,"ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. "ငါသည်သူတို့၏နှလုံးပေါ်မှာရေးထားသူတို့ရဲ့ mindsand အတွက်ငါ့ပညတ်တရားကိုထားမည်.
ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်,သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ " (ယေရမိက 31:33)
စာသားကပြောပါတယ်, "ဒီငါသည်ဣသရေလအမျိုး၏အိမ်တော်နှင့်အတူစေမည်ပဋိညာဉ်တရားကိုဖြစ်ပါတယ်…" လက်ျာအမျိုးသားရေးအရာကဲ့သို့မြည်? ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဋိညာဉ်တရားသစ်နိုင်ငံတကာကဘုရားသခင့အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်?
ကောင်းပြီထှကျမွောကျရာဘုရားသခင်၌မိမိလူဣသရေလအမျိုးကိုနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့. ထိုအခါယေရမိ၏စာအုပ်၏ဆက်စပ်ခုနှစ်တွင်, ဒီပဋိညာဉ်တရားသစ်လည်းဣသရေလလူမျိုးကိုဖန်ဆင်းနေပါသည်. ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ပြင်ပမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားသောသူအချို့သိသာသဲလွန်စရှိတယ်, ဒါပေမဲ့အချိန်ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြန်လည်အကြောင်းကိုဣသရေလလူမျိုးကိုတိုက်ရိုက်ဂတိတော်အောင်သည်.
ယရှေုသညျကမ္ဘာမြေမှကြွလာသောအခါ, သူ့ရဲ့အာရုံယုဒလူတို့အပေါ်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ပါသည်. မဿဲခုနှစ်တွင် 15:24, ယရှေုသညျကပြောပါတယ်, "ငါသည်သာလျှင်ဣသရေလအမျိုး၏အိမ်တော်ပျောက်သောသိုးကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ " ဒါပေမယ့်၏သင်တန်းကိုဣသရေလလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်နဲ့မဿဲ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအကုန်, သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကရှင်းပါတယ်. သူက "တပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအမိန့်တော်ရှိ,"မင့်ဣသရေလအမျိုး၏, ဒါပေမယ့်လူမျိုးအပေါင်းတို့၏.
အကြှနျုပျတို့တမန်တော်များနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏အားလုံးအတွက်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်, ဆိုးသောသူတို့ချွေတာဘုရားသခငျရဲ့အလုပ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်. သူကပင်ကိုအများဆုံးမဖြစ်နိုင်တမန်တော်ပို့ပေး, ပေါလုက, အထူးတပါးအမျိုးသားတို့အဖို့. သူ့ရဲ့အာရုံအမျိုးသားရေးလူမရှိတော့သည်, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတကာလူ.
ထိုအကြှနျုပျတို့သညျဤအဘို့ဘုရားသခင့ခြီးမှမျးပါသင့်တယ်! ဘယ်သူမှဘုရားသခင်အားကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ပွနျလညျထူထောငျခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူကဣသရေလအမျိုးမှလူရွေးနှုတ်တော်မူရန်မသနားတျောမူခဲ့. ထိုအခါသူကကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားကယ်တင်ခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်သနားတျောမူပါဆက်လက်. ဒါဟာလူတွေရေငတ်သေဆုံးနေကြပါတယ်နီးပါးတူရဲ့, နှင့်တစ်ဦးတည်းသာလူတဦးရေရှိတယ်. ရေအမြိုးသားသာမရရှိနိုင်ခဲ့တူနှင့်ပထမဦးဆုံးမှာကြည့်ရှု. ထိုအခါမူကားကျွန်တော်တို့ရေကြှနျုပျတို့အားလုံးမှရရှိနိုင်ထွက်ရှာတွေ့. ဒါဟာကလေးများကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ကြောင်းကြီး, ယခုမူကားငါတို့ရှိသမျှကိုနိုင်ထွက်ရှာတွေ့. ဤပုံဥပမာတိုတိုကျရောက်အဓိကလမ်းကျနော်တို့ငတ်သေဖို့ထိုက်ကြောင်း. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်သနားကြှနျုပျတို့လိုသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြှနျုပျတို့အားလုံးကမ်းလှမ်း.
ငါကငါဂျူးနွယ်ဖွားမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းင်ထင်. ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကဒီမှာယနေ့ညများမှာ. ငါကဒီမှာကျွန်တော်တို့အများစုကဂျူးမဟုတ်ကြောင်းပြောဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်ထင်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုအဘို့ဤအထူးသဖြင့်ခြီးမှမျးဖြစ်သင့်. ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်သူ၏မျက်စိသတ်မှတ်ထားတော်မူသည်ငါတို့အဘို့ခရစ်တော်စေလွှတ်တော်မူသောမယ်လို့. ဧဖက်အဖြစ်2ကပြောပါတယ်, "ထို့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၌တစ်ကြိမ်သင်သည်တပါးအမျိုးသားတို့သည်မှာသတိရ… သငျသညျထိုအချိန်ကခရစ်တော်ထံမှကွဲကွာခဲ့ကြကြောင်းသတိရ, ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပဋိညာဉ်တရားတို့မှဣသရေလအမျိုးနှင့်တကျွန်းတနိုင်ငံသားဓနသဟာယကှာ, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျမြှမမြျှောလငျ့ခရှိခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်မပါဘဲ. ယခုမူကားယေရှုခရစ်၌အထက်ကဝေးခဲ့ကြသူအသငျသညျခရစျတျော၏အသွေးအားဖြင့်အနီးကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီ။ " (ဧဖက် 2:11-13 တော်မူ၏)
သူကဝေးကျွန်တော်တို့ကိုချန်မထားခဲ့ဘူးကြောင်းသန်လျင်ကိုဘုရားသခငျသညျ, အကုန်အစင်ကူကယ်ရာမဲ့, ကိုယ်တော်မပါဘဲ. သူကဒီလိုလုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအားလုံးကိုတလျှောက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ခဲ့သိအဖြစ်. ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ဘယ်နေရာမှာငါတို့သိ. အဆိုပါဇာတ်လမ်းနယူးကောင်းကင်ဘုံနှင့် New Earth မှာအတူတူသိုးသငယ်ကိုကိုးကှယျလူမျိုးအပေါင်းတို့မှလူများနှင့်လျှာဖြင့်အဆုံးသတ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "က [သူ၏] သှေး [သူ] တမျိုးနှင့်ဘာသာစကားနှင့်လူမျိုးကိုမှဘုရားသခင်အဘို့လူရွေးနဲ့ လူမျိုးသည်" (ဗြာ 5:9).
ဒါကြောင့်ဒီတောင်ယခုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်အတူတကွနေထိုင်လမ်းကို impact သင​​့်တယ်. ဘုရားသခငျသညျရဲ့လူအဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူကိုကယ်တင်ညျဘုရားသခငျ၏အစီအစဉ်ကိုချွတ်ပြနေတဲ့လမ်းအတွက်အတူတူဘဝလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရပါမည်. တခါတရံမှာငါ့အသင်းနင်္ဂနွေနေ့နံနက်အပေါ်ဗတ္တိဇံမ. ထိုအခါငါအဲဒီမှာတက်ကြည့်မတူကွဲပြားလူသက်သေခံတော်မူချက်ပေးကမ်းမြင်ဖို့ကိုချစ်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံများ, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်၏ကယျတငျကျေးဇူးတရားထိုသူအပေါင်းတို့အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည်. ယနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြောသည်နိုင်. လူကျနော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတို့တွင်အလာသောအခါငါဆုတောင်း, သူတို့လူမျိုး၏ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးမျိုး၏ဘဝအသက်တာ၌ဘုရားသခငျ့အလုပျမှာအံ့ဩမယ်လို့. သင်သည်သင်၏အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်မျိုးနွယ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မင့်. ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုဖြစ်ခြင်းထက်အခြားအဘယ်သူမျှမအရည်အချင်းများရှိပါသည်. ထိုအခါငါတို့တှငျအပေါငျးတို့သငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုများမှာ.
ငါတွေ့ဆုံရန်ရှေးရှေးတစ်တွေအများကြီးဒီမသိရပါဘူး. သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသာလူနှစ်မျိုးကယ်တင်ထင်: အဟောင်းအဖြူ dudes သို့မဟုတ်ဟောင်းလူမည်းအဖွားဖြစ်စေ. သို့သော်ထိုသို့ဟုတ်မှန်မဟုတ်ဘူး, မှန်သော? ကျမ်းစာ၌ပါကရှင်းပါတယ် "သခင်၏နာမတော်အပျေါမှာကိုခေါ်တတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ " ငွေရတတ်သောသူကလူမယ့်, သို့မဟုတ်ဆငျးရဲကလူ, သို့မဟုတ်ဟောင်းကလူသို့မဟုတ်လူငယ်များ၏, ဂျူးလူသို့မဟုတ်အဖြူကလူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကလူသို့မဟုတ်. အဘယ်သူမျှမ, ဘုရားသခငျသညျလူအပေါင်းတို့အားသူ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်.
ကျွန်တော်တို့, ဘုရားကျောင်းအဖြစ်, ဘုရားသခငျသညျသာလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးအချို့သောမျိုးကိုကယ်တင်လိုထင်ရစေသည်ဘာမှမလုပ်နေ၏ကြောက်လန့်ဖြစ်သင့်. ဒါကပဋိညာဉ်တရားသစ်၏လှပသောနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေမယ့်. ဒါကဘုရားသခငျသညျခရစျတျောအတွက်သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုထည့်လေ့မရှိသူအဆိုအပြစ်ရှိသောသူကိုကယ်တင်မယ်လို့ဧဝံဂေလိတရားကို၏ဘုန်းအသရေ၏တစ်င်. ဒါဟာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အုပ်စုတစ်စုကန့်သတ်မယ့်.
ဘုရားကျောင်းအဖြစ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေရာတစ်ခုတည်းကနေမလာစေခြင်းငှါကျနော်တို့အတူတူတိုင်းရင်းသားနောက်ခံရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ငါတို့မူကားဘုံ၌အကြီးမြတ်တစ်ခုခုများ. ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ဘုရားသခင်နှင့်အတူပဋိညာဉ်တရားကို၌ရှိကြ၏. ထိုကြီးမားသောင်.
ဒါဟာလည်းငါတို့သာသနာပြုများပေးပို့နှင့်ထိုသူတို့အဘို့ဆုတောငျးသငျ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်! ကျွန်တော်တို့ကိုအခြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ဖွင့်ထုပ်ပိုးသွားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဤသူကား! ဘုရားသခင်ကပဋိညာဉ်တရားသစ်ကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်, သူတပါးအမြိုးသားတို့ပါဝင်သည်င်. တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုပြောပြသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ဣသရေလအမျိုး၏အိမျတျောကိုဘုရားသခငျ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုအကြောင်းစာသားဆွေးနွေးသော်လည်းဒါ, ကျွန်တော်တို့ကသူ့အစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့ကွောငျးသိ. ရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတှကျဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျးကွပါစို့. အလုပ်တူအတိအကျအဘယျသို့ကြည့်ရှုဘူး? အခွားအဘယျနညျးလမျး၌ဤပဋိညာဉ်တရားကိုသစ်ကိုရလိ​​မ့်မည်?
II ကို. ဘုရားသခင့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်သည်
ငါစာသားနှလုံးနဲ့စိတ်ကိုအကြားဤနေရာတွင်အချို့သောကြီးမားသောကွာခြားချက်ဆွဲရန်ကြိုးစားနေသည်မစဉ်းစားကြဘူး. ငါကပဲဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို၏အတွင်းပိုင်းတစ်ခုခုလုပ်မယ့်ကြောင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစကားသည်သုံးပြီးင်ထင်. အခြားဘာသာဟုပြော "ငါသည်သူတို့ကိုအတွင်းငါ့ပညတ်တရားကိုတင်ထားတော်မူမည်ငါသည်လည်းသူတို့၏နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်။ "
အခုတော့၏သင်တန်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုပညတ်တရားပေး၏, သူကကျောက်ပြားပေါ်၌ရေး. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကပြောနေ, "ဘယ်သူမျှမက, ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်ငါသည်သူတို့၏စိတ်နှလုံးများပေါ်အတွက်ရေးသားဖို့သွားတယ်။ "ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုပညတ်တရားကိုပေးတော်မူ၏ပထမဦးဆုံးအချိန်, သူကသူတို့ရှေ့မှာကတင်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကပြောနေ, "ဘယ်သူမျှမက, ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်, သူတို့ကိုငါ၏အတွင်းပိုင်းငါ့ပညတ်တရားကိုထားမသွားဘူး။ "
ကျနော်တို့ကပူနွေးတဲ့အတိုင်းနှလုံး၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှနေသားတကျပါပဲ, အတွင်းအပြင် fuzzy ရာအရပျ. ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူနှလုံးနဲ့ Valentine Day ကိုနှင့်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါင်းသင်း. ဒါပေမဲ့, သမ္မာကျမ်းစာသည်နှလုံးကိုပဲမုရှိတည်းစိတ်ခံစားမှုအရပျကိုထက်အများကြီးပိုပါတယ်. ကျမ်းစာ၌, စိတျနှလုံးအကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုလုံးကိုအတွင်းလူသည်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းကြှနျုပျတို့၏စိတျပါဝငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုတော်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒများ - အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်သမျှ. ဟီးဘရူးစကားလုံးကတကယ်တော့ဝမ်းကိုဆိုလိုသည်, သောကွောငျ့သောသူတို့သည်အသုံးပြုတဲ့ image ကိုဖွင့်. ကျနော်တို့စကားလုံးနှလုံးကိုသုံး.
စိတျနှလုံးအကြှနျုပျတို့ပွုအရာအားလုံးကို၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်ညွှန်ကြားသော GPS စနစ် system ကိုတူရဲ့. အဆိုပါပြဿနာကြောင့်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးင်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိစိတ်နှလုံးကိုမှားထင်, မှားခံစားမိ, မှားအလိုရှိသော. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားနားမထောင်, ကျွန်တော်တို့နေသော၏အဓိကမှာဖြစ်သောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့မှားနေ.
အဘယ်သူမျှမနေပါစေငါကဘားတန်းကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ဘဲခဲ့အဘယျသို့. ထိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စမဆိုအပြစ်သားဘာလုပ်တယ်, သူတို့ပဲဿုံသညျဘုရားသခငျ၏တရားကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွန်အားကိုတိမှေးမှမတတျနိုငျင်.
ဤရွေ့ကား, အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခငျ၏တရားဖြစ်ပါတယ်, ကဖြစ်သကဲ့သို့စုံလင်သော, ငါတို့ကိုကယ်တင်ဘယ်တော့မှနိုင်. ဤသူကားအဖွင့်ပြုပါရန်ကျွန်တော်တို့ကိုညာဘက်အရာပြောပြလုံလောက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်အဘယ်ကြောင့်.
ယနေ့တူပုံရသည်, အကျင့်ပျက်ဘဝနေထိုင်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်အငြင်းပွားမှုများအများကြီးသဘာဝအဖွင့်အဘယျသို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်ထို့ကြောင့်အချို့သောအလိုဆန္ဒများနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့. ဘယ်လိုတတျနိုငျသ
ဘုရားသခငျသညျအစဉျအမွဲဒီတော့ညာဘက်ခံစားရကြောင်းအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်, ကအိမ်မထောင်မီလိင်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း, သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ.
သမ္မာတရားကိုငါတို့စိတ်နှလုံးဒါကြောင့်ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်ပါသည်, ကမှားမှန်ခံစားရနှင့်ညာမှားခံစားရ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဆိုးရတဲ့အခါသူတို့ကိုမလေးစားမှယခုအချိန်တွင်၌တရားခံစားရ. ငါပုပ်ဂီတဗီဒီယိုကြည့်တက်ကြီးထွားလာတဲ့အခါ, ထိုသို့ screen ပေါ်မှာသူတို့အမြိုးသမီးမြားပြီးနောက်တပ်မက်ခွင့်ခံစားခဲ့ရ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေအတော်လေးပိုင်ခွင့်မရဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွန်အပေါ်ရုံနည်းနည်းခိုးခွင့်ခံစားရ. ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စား. တကယ်တော့ယေရမိ၏စာအုပ်ထဲတွင်အခြားအရပ်ဌာန၌, ကပြောပါတယ်, "စိတ်နှလုံးသည်ခပ်သိမ်းသောအရာကိုအထက်လှည့်စားသည်, နှင့်အသည်းအသန်နေမကောင်း; အဘယ်သူနားလည်နိုင်?" (ယေရမိက 17:9 တော်မူ၏)
ဒါဟာတရားကိုကျင့်ရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ခဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိစိတျနှလုံးသာပုန်ကန်မှုအတွက်တုံ့ပွနျကွသောကွောငျ့. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရတယ်, ငါတို့ကိုဝိညာဏနှလုံးအစားထိုးကုသပေး.
ဒီပြည်တွင်းရေးအလုပ်ကဒီပဋိညာဉ်သစ်၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင့ခြီးမှမျးပါသင့်တယ်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်မှမကျူးလွန်ခဲ့မယျဆိုရငျနေဆဲကူကယ်ရာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်. ဖိလိပ္ပိ2ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်, "ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ခြင်းကိုထွက်အလုပ်လုပ်…" အဘယ်ကြောင့်? "ဒါကြောင့်သင်၌အလုပ်လုပ်သောသူသညျဘုရားသခငျသည်, အလိုတော်နှင့်သူ၏ကောင်းသောပျော်မွေ့များအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့နှစ်ဦးစလုံး။ " (ဖိလိပ္ပိ 2:12-13 တော်မူ၏)
င်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထွက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ကို၏အတွင်းပိုင်းသူ့အလုပ်၏. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်သောကြောင့်သာအလိုရှိသောရန်နှင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်မယ့်အဘယ်သို့ပြုမှပြင်ပမှအလုပ်လုပ်နိုင်. ဘုရားသခငျသညျ Initiative နှင့်ဒီမှာပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကအံ့သြဖွယ်အလုပျအတှကျဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါသင့်တယ်.
ဒီအမှန်တရားက၏အလငျး၌ဒါ, ကျနော်တို့လုပ်နေသင့်ပါတယ်အတိအကျဘာင်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုထွက်အလုပ်လုပ်ရပါမည်. ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ပွဲအတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်သင့်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအတွင်းအလုပ်မှာဖွစျကွောငျးကို သိ.. ဘုရားသခင့ပဲသူ့လူတွေကိုမှာပညတ်တော်ထွက်ဟောင်ကောင်းကင်၌ထိုင်ကြပြီးပျက်ကွက်သည့်အခါသူတို့ကိုရှုတ်ချသည်မဟုတ်. သူကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချကူညီခြင်းနှင့်နာခံရန်ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလုပ်လုပ်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏တဲ့ပျင်းရိလိုက်စားဘို့မျှဆင်ခြေများ.
အားပေး. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအတွင်းအလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုအခါသူကမည်သည့်အပြစ်တရားထက်ခွန်အားကြီးင်.
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၌, ငါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီတွေ့နိုင်ပါသည်. ငါတော့ဘူးရုန်းကန်ကြဘူးမဟုတ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဒါကွဲပြားခြားနားသောင်. ငါသည်ငါ့အပြစ်တရားနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းမှတ်မိနိုင်. ပြီးတော့ငါကငါ့ကိုမနှောင့်အယှက်ဘယ်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုသတိရ. ငါသည်ငါ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲစတင်မီကပင်, ငါခံစားရတယ်လမ်းကိုသတိထားမိ, ငါထင်ပုံကို, နှင့်အဘယ်သို့ငါအလိုရှိသောပြောင်းလဲနေတဲ့ခဲ့သည်. ဒါကသာသညျဘုရားသခငျ၏ပြည်တွင်းရေးအလုပ်ရှိနိုင်ပါသည်. တဖန်ဘုရားသခင်ကအခွားသူမြားကိုကပြုပါစောင့်ကြည့်ထကျ သာ. ခြိုဘာမှမရှိဘူးင်. ငါဝမ်းမြောက်ပြောနိုင်သောကြောင့်, "ဟေ့, သူကလည်းငါ့ကိုပြု၏!"
III ကို. ဘုရားသခင့ Interpersonal အလုပ်လုပ်သည်
ဘုရားသခင့်ဖြစ်စေကြောင်းအဆိုပါပဋိညာဉ်တရားကိုတစ်ဦးမျှသာစာချုပ်မဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာသူတို့အဘို့အကောင်းသောအရာလုပ်ဖို့ကိုယ်တော်အဘို့အအချို့သောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး. ဤပဋိညာဉ်တော်သည်လူတို့နှင့်အတူတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးအတွက်အမြစ်တွယ်နေသည်. ဘုရားသခင့ရုံအရာနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ကတိထားတော်မမူ, သူကကိုယ်တော်တိုင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ကတိပေးခဲ့တင့်. သူကငါတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်. ဒါဟာအသစ်တိုက်ခန်းတစ်ဦးငှားရမ်းလက်မှတ်ထိုးမကြိုက်ဘူးင်. သငျသညျကိုပြုလိုက်တဲ့အခါ, သင်ရုံအသီးအသီးလကိုသင့်အိမ်ရှင်ကငှားဆပ်ဖို့ကတိပေးပါတယ်. ထိုသို့တူမဖွင့်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိပါတယ်, ကျူးလွန်မေတ္တာနှင့်ရှိသူ၏လူတို့အပျေါသူ့လုပ်ရပ်၏အားလုံးအတွက်ချစ်ခင်.
ထိုအပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအချို့သောမျိုးကိုရှိပါရဲ့. သူကသူ့သားတော်၏အသွေးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်ယူကျွန်တော်သူ့ကိုပိုင်င်. ဒါဟာငါ့ကိုသတိပေး တစ်ယောက်တည်းခရစ်တော်အတွက် လိုင်း, "ငါသူ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသူသတ္တုတွင်းသည်. ခရစ်တော်၏အဖိုးတန်အသွေးနှင့်ဝယ်."ဘုရားသခအမြဲသူ့လူမျိုးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆကျဆံရေးရှိရှာကြံခဲ့သည်, နှင့်ဤပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်အတူဆက်လက်ခဲ့.
ခရစ်ယာန်, သင်သည်သင်၏ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဘုရားသခငျ၏ထင်ပါသလဲ, သို့မဟုတ်အဖြစ်မျှသာဘုရားသခင့? သငျသညျဘုရားသခငျ၏စဉ်းစားသောအခါသူကဖွင့်ရှိရုံဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည်? သို့မဟုတ်သူသည်သင်၏ခမည်းတော်သည်အ? သူကသင်တို့၏ဝိညာဉ်၏ Lover Is?
သငျသညျအထံတော်သို့ရှုမွငျလမ်းကိုသငျသညျအထံတော်တုံ့ပြန်လမ်းကိုပြောင်းလဲသောကြောင့်. သူကမိမိတို့ဘုရားသခငျခဲ့လျှင်အဖြစ်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လူအသကျရှငျမခံခဲ့ရပါ. သူတို့ဟာရုပ်တုဆင်းတုကိုကိုးကွယ်ကြ၏. သူတို့ကသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်မဟုတ်. သူတို့ရဲ့လူနေမှု ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုမျှဒီသူတို့၏ဘုရားသခင်ကပြောသည်. ထိုသူတို့၏အသက်တာအကြောင်းကိုဘာမျှမသူတို့ကသူ့လူဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်.
ခရစ်တော်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချကြသူကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကသူ့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကသူ့နာမညျတံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်. အရာအားလုံးကိုယ်တော်ပိုင်, ဒါပေမယ့်အထူးလမ်းအတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြောသည်, "သူတို့က။ သတ္တုတွင်းများမှာ" ငါတို့ဘဝတွေကိုဒီအမှန်တရားကိုသက်သေခံသင့်တယ်.
ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှသွားသောအခါ, သူကကျွန်တော်တို့ကိုဠာ၏ဘုရားသခင်အားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏. ကျွန်တော်သူကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကြောင်းသမ္မာတရားကိုဆုပ်ကိုင်ကျွန်တော်သူ့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏လျှင်ကြောင့်ဆုတောင်းပဌနာဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့အဘယ်သို့ငါတွေးမိ. ငါကသူ့လူတွေကိုကျွန်ခံရကြ၏ဘယ်မှာထှကျမွောကျရာအကြောင်းကိုစဉ်းစားစာသားကပြောပါတယ်, "သူကသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်ခြင်းစကားကိုကြားနှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့နှင့်သူ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုအောက်မေ့တော်မူ၏။ " ခရစ်ယာန်, ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့အားကိုယ်တော်တိုင်ကျူးလွန်မရှိသေးပါဘူးတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့သည်. ဘုရားသခင်သည်သင်၏ပဌနာကြားသူကအမြဲမတ်ေတာလမ်းအတွက်တုံ့ပြန်မည်. သူသည်သင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်. သငျသညျမိမိလူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏.
ကျနော်တို့သူကကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကြောင်းသမ္မာတရားကိုဆုပ်ကိုင်ကျွန်တော်သူ့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏မယျဆိုရငျရုံးတင်စစ်ဆေးအလယ်၌ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ပိုပြီးသက်သာခြင်းတွေးမိ. ရောမ 8 အဘယ်အရာကိုမျှခရစ်တော်အတွက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး. ငါသည်ယောသပ်ကိုကျွန်ခံနေရာသို့ရောငျးခံရအကြောင်းကိုစဉ်းစား, သူ့ညီကိုမကောင်းသောအဘို့အဓိပ်ပာယျသည်ဟုဆို, ဘုရားသခငျသညျကောငျးကြိုးအတှကျအဓိပ်ပာယျ. အဘယ်သူမျှမနေပါစေကျွန်တော်တို့အလယ်၌နေစမ်းသပ်မှုတွေဘယ်လို, ဘုရားသခငျသညျသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့ထိုသူတို့သုံးလိမ့်မည်. သူသည်သင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်. သငျသညျမိမိလူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏.
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၌ထင်, ငါသည်ဤသဘောမပေါကျဘူးလာသောအခါကြိမ်, ငါဘရတ်ယနေ့နံနက်မပြုငါတို့ကိုခေါ်အတိအကျအဘယ်သို့ပြု. အဲဒီအစားငါကသူ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသမ္မာတရားကိုဖက်တွယ်၏, သူသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏, ငါအခွက်တဆယ်ပြပွဲသို့ငါ၏အခရစ်ယာန်အသက်တာကိုဖွင့်ရန်စတင်; ငါသည်ဘုရားသခင်အဘို့အလုပ်ဆောင်နဲ့ကျွန်မကောင်းစွာလုံလောက်တဲ့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကောင်းသောကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းသို့လုပ်ဘယ်မှာ. သို့သော်လည်းငါသည်သူသည်ငါ၏ဘုရားသခင့သောသမ္မာတရားကိုနားလညျငါသူ့ကလေးဖြစ်၏အခါ,, မေတ္တာထဲကနှင့်သူ၏ကျေးဇူးတရားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထဲကကိုယ်တော်စကားကိုနားထောငျခငျြ. ငါကိုယ်တော်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်သရန်မလိုပါ. ဘုရားသခငျသညျငါ့ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်. ငါကားအဘယ်သူနောက်နေပါ၏? သူသည်ငါ၏သန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းငါပြုမည်ထက်ပိုမိုဂရုစိုကျတယျ. သူသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်. ငါကသူ့လူမျိုး၏တဦးတည်းဖြစ်၏.
ငါအပေါ်သွားနှင့်အပေါ်နိုင်. သို့သော်ထိုသို့အရေးပါသည်, ကြှနျုပျတို့သညျဤတစ်ကိုင်ဖမ်းပြီးကြောင်း. သူကငါတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကျွန်တော်သူ့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏. အကြှနျုပျတို့ကိုကယျတငျတျောမူဒီလူ့အလုပျအတှကျကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရသင့်တယ်.
IV. ဘုရားသခငျသညျအလုပျမှာ Is
ငါသည်ဤကျမ်းပိုဒ်အတွက်အရေးအပါဆုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများသင်တို့အပေါ်မှာကျော်သွားကြပေမည်ငယ်နှစ်စကားလုံးမြားဖွစျသညျထင်, ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ "ငါသည်။ လိမ့်မည်", "ကျွန်မနေတဲ့ပဋိညာဉ်တရားသစ်စေမည်။ " ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏, "ငါသည်သူတို့ကိုအတွင်းငါ့ပညတ်တရားကိုတင်ပါလိမ့်မယ်။ " ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏, "ငါသည်သူတို့၏စိတ်နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်။ " သူကပြောပါတယ်, "ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ "
ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, ဒီပဋိညာဉ်တရားသစ်နောက်ဆုံးမှာသင်တို့အပေါ်မှာမူတည်ပါဘူး. ဒါဟာဘုရားသခင်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်နှင့်အဆုံးသတ်. ဘုရားသခငျသညျအစီအစဉ်ရှိခဲ့သူကိုတစျခုဖွစျသညျ. ဘုရားသခင့သနားတတ်သောသူတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပြစ်မှားမိပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်မယူခဲ့ပါ. ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောတ. ဘုရားသခငျသညျခရစျတျောအပေါ်သူ၏ဒေါသအမျက်ကိုသွန်းလောင်းသောသူခဲ့. ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသစ်တစ်ခုသတ္တဝါဖန်ဆင်းတော်မူသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသူ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏သောသူဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသစ်တစ်ခုနှလုံးပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုသန့်ရှင်းစေသောသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျစောင့်ရှောက်မည်သူကိုတစျခုဖွစျသညျ. တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုခြီးမွှောကျကွလိမျ့မညျသောသူဖြစ်ပါသည်. ဤပဋိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်နှင့်အဆုံးသတ်.
ယုံကြည်သူများအတိုင်းဤကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမြတ်နှစ်သိမ့်ဆောင်ကြဉ်းသင့်ပါတယ်. ကျွန်တော်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မနာခံမှုဤပဋိညာဉ်ကိုမချိုးနိုင်မသိသောကြောင့်. တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်မဲခြင်းဤပဋိညာဉ်ပျက်ကွက်အောင်မနိုင်. ဘုရားသခငျသညျအလုပျမှာသောကြောင့်,, သူကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်ကျူးလွန်င်, သူပျက်ကွက်ပါဘူး.
ဤရွေ့ကား, ဤပဋိညာဉ်တရားသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလှပသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများမှာ. သို့သော်ထိုသမ္မာတရားကိုဤသူတို့သာဘုရားသခင်နှင့်အတူပဋိညာဉ်တရားကို၌နေသောသူတို့အားရရှိနိုင်ကောင်းကြီးကြသည်သည်. ကျနော်တို့အသက်တာ၌ယုံကြည်ကိုးစားသောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူပဋိညာဉ်တရားကိုထဲသို့မဝင်ရ, သေဆုံးခြင်း, နှင့်သူ၏သားတော်ကို၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, ယရှေုခရ. သငျသညျခရစျတျောသိ don't အကယ်., ယနေ့သင့်ရဲ့အပြစ်မှဖွင့်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုအပေါ်ယုံကြည်. အဲဒီအစားသူ၏ဒေါသအမျက်ထွက်လောင်း၏, ဘုရားသခင်ထာဝရအဘို့သင့်ခေါင်းပေါ်မှာမကုနျနိုငျစည်းစိမ်ဥစ္စာသွန်းလောင်းမည်.
သငျသညျသတိပြုမိစေခြင်းငှါ, ပန်းချီပုံမှာ awfully စုံလင်သောအသံကြောင့်. ကျနော်တို့ကိုယ်တော်နှင့်အတူအထိထိုအမှန်တရားကကျနော်တို့အကြောင်းကိုပြောဆိုသောပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဤရှုထောင့်အဘယ်သူအားမျှဿုံသဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကိုယ်တော်နှင့်အတူသောအခါကျွန်တော်တစ်ဦးစုံလင်သောမြင်ရကြလိမ့်မည်, ခရစ်တော်၏စင်ကြယ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတို့သမီး. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်နှင့်အတူတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စုံလင်သောအတူလူဖြစ်ရလိမ့်မည်, ခရစ်တော်နှင့်သူ၏နည်းလမ်းအားလုံးကိုချစ်ကြောင်းစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးများ. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်နှင့်အတူတဲ့အခါ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်နှင့်အတူတစ်စုံလင်သောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိလိမ့်မည်ငါတို့သည်လည်းသူ့လူအဖြစ်ကိုယ်တော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်. ထို့နောက်အချိန်အထိကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်နေ့တိုင်းသူ့ကို ပို. ပို. ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကွိုးစားကွ. ရဲ့ဆုတောင်းစေ.